Nin hubeysan oo Rasaas uu furay ku dilay Dad gudaha Magaalada Gaalkacyo – SBC
Nin hubeysan oo Rasaas uu furay ku dilay Dad gudaha Magaalada Gaalkacyo
Posted by Webmaster on October 13, 2012 Comments
Nin hubeysan ayaa maanta rasaas hubiyay rag ku shaahayay Maqaaxi ku taala gudah amagaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug.
Ninkani ayaa la soo baxay Qori, waxaana uu rasaas hubiyay laba nin oo fadhiyay goob meherad ah, waxaana rasaasta ku dhintay mid ka mid ah labada nin uu ninkani hubeysan beegsanayay halka ninka kalena uu dhaawac soogaray.
Sida ay ku warameen dad goob joogayaal ah ninka geystay rasaaseynta ayaa islamarkiiba ka baxaday goobta waxaana iminka ku daba jira ciidamada Amaanka oo baaraya falkaasi.
Warar hoose oo ay SBC heshay ayaa ku waramaya in ninkan iyo raga uu beegsaday ay horay uga dhexeysay xurguf isalamarkaana dhacdada maanta ay sidaasi ku timid.
Sikastaba ha ahaatee xalaada magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka Maamul goboledka galmudug waayadii ugu dambeysay waxay aheyd goob aad u nabadeysan oo aan ka dhicin waxyaabaha amaanka wax u dhimaya.
Sida ad wax u soo qortay waa si qaloocan.Sheekada ad soo qortayna say ahayd uma adan sheegin.Saas darteed qalbigaad ka jiran tahay.Haddii ad caafimaad qabtid maad tiraahdid meesha uu ninku dadka ku xabadeeyey waa dhanka Galmudug.Tan kale ee ad tiri waayahaan dambe galmudug baa gaalkacyo ugu nabad fiicnayd waa beentaa.Hadda kala bilaabaana qoraaladaadu macne ma yeelan doonaan.Ugu dambeyn yaad been u sheegi kartaa illaa waa la wada ogyahay waxa ka jira Baraxleye.
Asc all dadwenah rer somaliy jar ahaan rer puntland kadib waxan salamayah bahad saxafadah waxan leyahay malin wanag san